အဘယ်မှာရှိဥရောပမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းအနုပညာကိုကြည့်ပါရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်မှာရှိဥရောပမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းအနုပညာကိုကြည့်ပါရန်
လမ်းပေါ်ကအနုပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကြီးများပိုပြီးလှပစေသည်အနုပညာထုတ်ဖော်ခေတ်မီပုံစံဖြစ်ပါသည်. A ကောင်းဆုံးလမ်းနံရံကိုလည်းလူမှုရေးအရအရေးကြီးသောဘာသာရပ်စဉ်းစားရန်သင့်အားလာအောင်နှိုးဆွသို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်သခင်၏အကျင့်သင်သတိပေးစေခြင်းငှါ,.
ဥရောပမြို့ကြီးများလမ်းပေါ်အနုပညာနှင့်ရေးခွနှင့်အတူလျှံကြီးမြတ်သောအရပ်တို့ကိုအပြည့်အဝရှိပါတယ်. သင်သည်တာရှည်ပန်းချီကားများနှင့်အတူ brimming လမ်းများမှတဆင့်သွားလာနှင့်ပျင်း get ဘယ်တော့မှယူနိုင်ပါသည်. ဤတွင်အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းပေါ်အနုပညာနှင့်ရှိရာဥရောပ၌မြင်ရဖို့င်:
လန်ဒန် လမ်းပေါ်ကအနုပညာတန်ဖိုးထားသောသူတို့အဘို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့ကြီးများနှင့်အနုပညာရှင်များ၏သူတို့ကိုယ်သူတို့တစ်ခုဖြစ်သည်. လမ်းတွေပေါ်မှာလူတို့တွင်သင်တို့ကိုစိတ်ကူးအနုပညာသင့်ရဲ့ထိုးရဖို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, ကန်ဒန်းနှင့် Shoreditch ထွက်မတ်တပ်ရပ်. သို့သျောလညျး, အုတ်လမ်းကြောနှင့် Southbank လူသိများမှာ ခရီးစဉ်, လွန်း. နေဆဲ, သငျသညျအကျော်ကြားဆုံးတည်နေရာရှာနေမယ်ဆိုရင်, Shoreditch မှဦးခေါင်း.
ပဲရစ်ပြည့်ဝ၏ လမ်းပေါ်ကအနုပညာပူသောအရပ်, သူတို့မကြာခဏတစ်ခုလုံးကိုလမ်းများ span အဖြစ်. , rue Saint-Maur မှတဆင့် 10 ကြိမ်မြောက်နှင့် 11 arrondissements မှဦးခေါင်း. ဒါဟာအပြည့်အဝဖွင့် Shepard Fairey အဆောက်အဦး၏နံရံများပေါ်တွင်အဖြူအနက်ရောင်-and ပုံတူ, အရာကအကြီးအလမ်းလျှောက်စေသည်. ဤသည် 2km ရှည်လျားသောလမ်း, rue Oberkampf နှင့်အတူဖြတ်, လမ်းတစ်လမ်းအနုပညာရှုထောင့်ကနေတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ရာအရပျ.
ဘာလင်ရဲ့အရှေ့ဘေးထွက် ပြခန်း မြို့ပြအနုပညာကိုခံစားသောသူတို့အဘို့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနေရာများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမြို့သူ့ဟာသူတစ်ဦးရင်းနှီးမြှပ်နှံလမ်းပေါ်ကအနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်, ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံး Kreuzberg နှင့် MITT အတွက်ပုံအော. ချစ်စရာကောင်းအတွင်းစိတ် alleyways နှင့်အထင်ကရလမ်းပေါ်ကအနုပညာကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူခရိုင်နှစ်ခုရှိပါတယ်. အကောင်းဆုံးကိုအနုပညာကိုရှာဖွေဖို့ Kreuzberg ခရိုင်၏အရှေ့ပိုင်းအဆုံးမှဦးခေါင်း.
ရောမမြို့ လမ်းပေါ်ကအနုပညာကိုလက်ခံနေတဲ့ကျောက်တောင်လမ်းရှိခဲ့ပါတယ်, သို့သော်ဤလှပသောမြို့ယခုနောက်ဆုံးတွင်မြို့ပြအနုပညာဖန်တီးမှုများသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြခွင့်ပြုထားသည်. လမ်းပေါ်ကအနုပညာတဖြည်းဖြည်းတက်ယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးထားပြီးဘယ်မှာအနည်းငယ်ခရိုင်ရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးနေရာက San Lorenzo ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, အတူရပ်ကွက်အတွင်း တက်ကြွရေးခွများများ. သငျသညျအခြို့သောအဆင်းလှလမ်းပေါ်ကအနုပညာရှာနေရောမမြို့သွားရောက်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်, Via Enotri အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, Ausoni မှတဆင့်, dei သာဒိနှင့် via dei Sabelli မှတဆင့်.
Frankfurt တဦးတည်းလမ်းပေါ်ကအနုပညာဝါသနာအိုးများအတွက်စာရင်းထဲတွင်ရှာတွေ့မှမမြျှောလငျ့စခွေငျးငှါမြို့တမြို့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးထက်ပိုဟာအဲဒီအဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်အဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မြို့တော်. သို့သျောလညျး, တဦးတည်းလိုပင်မြို့ကြီးများအားကြီးသောလမ်းပေါ်ကအနုပညာစကားရပ်ရှိခြင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းငြင်းနိုင်, အများအားဖြင့်လူနေမှုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်မှာပုန်ကန်အတွက်. Frankfurt အဆိုပါန်းကျင်လမ်းပေါ်ကအနုပညာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဘူတာရုံ နှင့်မြို့လယ်. Ratswegkreisel အပေါ် Fame ၏ခန်းမသို့သွားရောက်ရန်နောက်ထပ်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
အမ်စတာဒမ်ရဲ့လမ်းပေါ်ကအနုပညာမြင်ကွင်း အတော်လေးခိုင်မာ, နှင့်မြို့ပြအနုပညာပင်ရောက်ရှိ ပြတိုက်ပြပွဲ. အကောင်းဆုံးသောနေရာများ အမ်စတာဒမ် လမ်းပေါ်ကအနုပညာများအတွက် Spuistraat များမှာ, Wijdesteeg, နှင့် NDSM, မြို့လယ်ဧရိယာများအပါအဝင်. သငျသညျကိုလညျးကနေလမ်းပေါ်အနုပညာခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါသည် အမ်စတာဒမ်ဗဟိုစခန်း. ဒီခရီးစဉ်တည်ရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုဤမြို့ကို၎င်း၏လမ်းပေါ်အနုပညာဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူအကြောင်းကိုအလုံအလောက်သငျသညျကိုပြောတယ်.
ပင်လူရဲ့အိမ်တွေမှာ - အချို့ကိုသင်ရောင်စုံများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလမ်းပေါ်ကအနုပညာကိုတွေ့မြင်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်ကိုပင်ဟေဂင်ကြီးစွာသောမြို့ဖြစ်ပါသည်! Christiania သင်သည်ပါရမီမြို့ပြအနုပညာရှင်များကအကောင်းဆုံးအကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သည်အဘယ်မှာရှိ, ဒါကြောင့်လွဲချော်ဖို့မသေချာအောင်.
သငျသညျဥရောပကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးကိုလမ်းပေါ်ကအနုပညာကိုမြင်ရဖို့အဆင်သင့်တယ်ဆိုရင်; ဤအရာအလုံးစုံမြို့ကြီးများရထားအလွယ်တကူများမှာ. သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ အချိန်ပေါ်နှင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ခံရဖို့ကွိုတငျပွငျဆငျ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-street-art/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ကိုပင်ဟေဂင် Frankfurt graffiti လန်ဒန် Street Art travelamsterdam travelberlin travelparis travelrome